Isiketi esiyingqayizivele se-tulle siyinto emangalisayo, ehlale ihambisana, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izitayela ezikhona emhlabeni jikelele. Kuyinto engavamile kakhulu ukuyibona ekuqoqweni kwabakhi bezimfashini, kodwa abesifazane abazimisele ukugqoka kubonakala kulula futhi bekhangayo.
I-Fatine yinto ebonakala kalula, okuyinto abaqambi abaphathwa ngayo ngendlela ekhethekile. Isiketi se-tulle singaba se-multi-layered kuphela. Ngesikhathi esifanayo, kunamamodeli angaphezu kwalokhu, ngakho-ke wonke owesifazane uzokwazi ukuzikhethela yena.
Isiketi esifushane se-tulle
Isiketi esincane esifundeni singaba, njengengxenye yesigceme sokugqoka, nezembatho zokudansa. Isisindo esincane, esithambile senza induduzo edingekayo ngesikhathi sokunyakaza. Ukudansa, i-tutu skirt eyenziwe nge-tulle isetshenziswa. Lesi sithombe asiphazamisi ukunyakaza komzimba futhi sithuthukisa ngokuphelele ubuhle babo.
Uma ukhuluma ngemfashini, kufanelekile ukuphawula i-skirt-chrysanthemum kusuka ku-tulle. Kuvame ukugqoke abesifazane abathanda ukushaqeka noma abameleli bama-subcultures yentsha. Isiketi esikhwameni sinezimpaphe zokugqoka kunzima ukubonisa kunoma yisiphi isitayela esithile, ngakho-ke izingubo zokubamba iqhaza kwakhe ngezinye izikhathi zishaqeka.
Izinkanyezi eziphindaphindiwe zaseHollywood zavela ngokuhlanganiswa okumangalisayo, okuhlanganisa izinto ezivela emithambekeni ehlukahlukene yemfashini, okwabangela ukudumazeka nokugxeka ekuqondiseni kwabo.
Uma ungafuni ukumangazwa nge-epatage, kodwa ufuna ukugqoka isikwele esincane esifundeni, bese unaka imodeli eningi egqamile. Isiketi sezingqimba eziningana ngeke sibonakale sinengqondo futhi sivuselela, sizoheha kuphela ngobuhle bayo.
Isiketi eside se-tulle
Isiketi eside sithandwa kakhulu kunesikhashana. Ligqoke amantombazane nabesifazane abancane. Isithombe, esihlanganisa isiketi esikhwameni, sikhuluma ngokuthobeka nokukhanya kwentombazane. Kunamamodeli amaningana wesiketi eside:
Isiketi se-taffeta ngesitimela yisembatho esihle sakusihlwa. Izinto zomoya ezihambisana ne-corset zizokwenza isisekelo sesithombe esicacile. Isitimela sizokwengeza ukunethezeka kanye ne-royal chic. Ngakho-ke, lo modeli uphelele amaqembu okuphothula. Kanti futhi, ngokuvamile isiketi esikhishwe ngesitimela sisetshenziswa njengengxenye yomgqo womshado womakoti. I-white tulle yinto efanelekayo yokugqoka umshado.
Imodeli yesibili iyisimo esivela ku-tulle kuya phansi - lokhu kuyindlela yamakhosazana. Isiketi esikhululekile sizokutshela mayelana ne-aristocracy yomnikazi wayo. Lo modeli ngokuyinhloko uqukethe izingqimba ezimbili - izendlalelo ezingezansi nezingaphezulu. Isiketi esingaphansi singenziwa nge-tulle, satin noma enye impahla efanelekayo. Isiketi esiphezulu senziwa kuphela nge-tulle, kuyilapho ingaba yiklabhu eyodwa noma i-multilayered.
Imodeli yakamuva - isiketi esikhishwe ngomsila sifanele ibhizinisi nsuku zonke kanye nokuhlwa kusihlwa, konke kuxhomeke ezesekeli ezikhethiwe. Imodeli ngomsila ivame ukubizwa ngokuthi i-asymmetrical - ivula imilenze ngaphambili, iphinde uyivale ngemuva, ngokuphambene nalokho. Le skirthi ihlangene ngokuphelele ne- blouse yowesifazane , phezulu kanye nejeketi noma phezulu nesigqoko.
Ngesinye isikhathi umkhonto onomsila wawuvame ukubonakala ezinkanyezini zaseMelika, ukulula kwengubo yabo kwakuthandeka futhi kumangaze. Lezi zimfashini zendawo eziphoqelelwe ukukopisha lesi sitayela. Isiketi esiyingqayizivele semisindo esenziwe nge-tulle sichaza ngokucacile ukuhamba kwemilenze, futhi ubukhazikhazi bendaba abuphazamisi ukugcizelela ukuphakama kwesibalo sabantu besifazane.
Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi isikhwama esiphendukayo sibheka inzuzo kuphela kumantombazane amancane, abanikazi bezibalo ezinhle kakhulu kufanele baphephe le nto. Ngaphezu kwalokho, ingubo enjalo ivumelana ngokuqondile nesithende esiphezulu futhi ihlanganisa ukungafani nezicathulo endaweni eyodwa.
Ibhuloho yezemidlalo Panache
Izicathulo zabesifazane ezenziwe ngesikhumba sangempela
Isiketi esikhwameni emkhombeni
Ama-black sneakers - amamodeli ahamba phambili kunazo zonke nokuthi yini okufanele uwagqoke?
Amabhuzu ezinwele ezimhlophe
I-Pantsyubnik yokugqoka obala
Izicathulo zesikhumba zasebusika zabesifazane
Amasinebe esiteshini esifihliwe
Ukufa komkhwenyana kwaba yingozi enkulu kuMichel Dockery
I-osteoarthritis ye-joint hip - ukwelashwa ekhaya
Iviki le-couture high eParis: Kaya Gerber, Marion Cotillard nezinye izinkanyezi embukisweni weChanel
Ekuvikeleni uJohnny Depp uzofakaza kubantu abangamashumi amabili nane
Ukudla kweSaki, eCrimea
Ukwelashwa kwe-giardiasis ezinganeni
Izindaba zakamuva ezivela empilweni kaHarry Harry
Ukukhathazeka okuhlala njalo ezinganeni - kuyini?
Recipe for saltwort nge inyama ebhemayo
Igebe phakathi kwamazinyo
Iyini ithenda - ukuthi ungahlanganyela kanjani ithenda kumuntu omusha futhi uyinqobe?
Ukumiswa kwelayili elondoloziwe endlini yokugezela
Ukungasebenzi kwe-vestiva neurogenic ezinganeni
Isonto lokuqala lokukhulelwa - izimpawu nokuzwa
Izingxenye ze-Glass zegumbi
Indima yomndeni ekukhuliseni ingane
I-vaginosis ye-bacterial - ukwelashwa